အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးပမ်းရာမှာ စိတ်မကောင်းစရာ ဝမ်းနည်းစရာတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေအရ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်သလို တည်ဆဲဥပဒေတွေကိုလည်း လေးစားလိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရေဒီယိုကနေ ပြည်သူတွေကို လစဉ်ပြောကြားနေတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။
"အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကြိုးပမ်းတဲ့ကိစ္စရပ်များမှာ စိတ်မကောင်းစရာ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကိစ္စရပ်တွေ များစွာဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီဖြစ်ရပ်တွေမှာ ကျနော်တို့အားလုံး သင်ခန်းစာတစ်ရပ်အနေနဲ့ ရယူဖော်ထုတ်နိုင်တာကတော့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဟာကို အနေဝေးခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီဖြစ်ရပ်ကို သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ အင်အားစုအားလုံးဟာ နောင်ကြုံတွေ့လာမယ့် ဖြစ်စဉ်များမှာ ပိုမိုပြီးစည်းကမ်းတကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကို မြှင့်တင်ကြရမှာ လည်းဖြစ်ပါတယ်၊ တဆက်တည်းမှာလည်း ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များအရ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားဆောင် ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုရမှာနည်းတူ တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ စည်းကမ်းတွေကိုလည်း လေးစား လိုက်နာကြဖို့လည်း လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်"
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ မဟာဗျုဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကို အထိခိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ထည့်သွင်းပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အောင်တံခွန်ရေယာဉ် နစ်မြုှပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဌာနတွေ၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်၊ ပေါ့ဆချက်တွေ ရှိကြောင်းနဲ့ နောင်မှာ အခုလိုဖြစ်ရပ်မျိုးမကြုံစေဖို့ အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
Thein Sein is definitely challenging for civil war.
Apr 08, 2015 09:52 AM
Thein Sein isaprofessional in pretending. Because of that, he has got honorary degree from Korea. He does not like to amend constitution which is the shield for military government. They need to protect themselves with the present constitution. They love themselves rather than the country and people of this country. Look.. they hastily make decision to pay compensation to China for5people but they can freely kill Myanmar lady... Look Ko Par Aye and Daw Khin Win and many students and etc.
Apr 05, 2015 06:02 AM
ကျောင်းသားပြည်သူ ကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းနေစေခြင်ရင် အစိုးရ ကိုယ်တိုင် လဲ ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ရမယ်။ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ခြေ/ဥ ဆွဲတဲ့ အစိုးရ အာဏာရအောင် အတင်းမဲလိမ်တက်တဲ့ အစိုးရ လွှတ်တော်ထဲ စစ်သားတွေ အတင်းထည့်ထားတဲ့ အစိုးရ ကို ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက လေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀/၆၀ လုံး ဆန္ဒပြ မှုအကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့တာကိုကြည့်။ လက်နက်နဲ့အတင်းဖြိုခွင်းခဲ့လို့သာငြိမ်နေကြတာ။
Apr 04, 2015 08:32 PM
Apr 03, 2015 08:18 PM
“တည်ဆဲဥပဒေ”ဆိုတာ စစ်အာဏာပိုင်လက်တဆုပ်စာကိုပဲ အကျိုးးပြုတဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ်စစ်ဥပဒေကို “ရည်ညွှန်း”တာ ဆိုရင်တော့ ဗိုသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရဟာ “သန့်ရှင်းသော အစိုးရ” မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
Apr 03, 2015 04:51 PM